japanSamachar | Education/Technology | जापानमा बिदेशी बिद्यार्थीको बेदना-परिक्षामा थोरै अंक ल्याए देश फिर्ता !
(Japan) 1 st December | 2020 | Tuesday | 3:10:39 PM || (Nepal) 11:55:39 AM
जापानमा बिदेशी बिद्यार्थीको बेदना-परिक्षामा थोरै अंक ल्याए देश फिर्ता !
POSTED ON : Saturday, 31 October, 2020 | Views : 454
सन् २०१९ को अक्टोबरको एक साँझ पश्चिम जापानको शहर कोबेमा दुई जना व्यक्तिले २१ वर्षिय भियतनामी विद्यार्थी डानलाई एउटा नोटिस थमाइदिए । सो सूचनामा ती विद्यार्थीलाई सोही रात भियतनाम फिर्ता पठाउन थालिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सूचना थमाइदिने दुबै व्यक्ति जापानी भाषा विद्यालयमा काम गर्थे । एफोर आकारको सो सूचनामा ती विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निकालिएको कुरा थियो । उनलाई विद्यालयबाट निकाल्नुको एक मात्र कारण भने उनको शैक्षिक प्रदर्शन अति नै खराब हुनु थियो ।
ती विद्यार्थीलाई एउटा कारले कान्साई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुर्याइदियो । तिनी सन् २०१८ को अप्रिलमा जापान आएका थिए । जापानमा करीब डेढ वर्ष बस्दा पनि जापानी भाषा प्रविणता परीक्षा (एनफाइभ) मा उत्तिर्ण हुन सकिरहेका थिएनन् ।
विद्यालयको परीक्षामा ८० अंक ल्याउन सकेनन् भने उसलाई विद्यालयबाट निकालिने कुरा बताइयो । सूचना पाएको दिनको बिहान उनले दोस्रो परीक्षा दिएका थिए । सो परीक्षामा उनले ७० भन्दा कम अंक पाए ।
परीक्षा दिएपछि डराएर डान विद्यालयबाट भागेर अपार्टमेन्टमा आए । त्यसको केही समयपछि विद्यालयका कर्मचारीहरुले उनलाई सूचना थमाइ दिए । विमानस्थल जाने क्रममा कारमै रहँदा डानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीभाइहरुलाई मद्दतका लागि म्यासेज पठाएका थिए ।
चिनजानकी एक भियतनामी महिला उसलाई विमानस्थलमा भेट्न पनि आएकी थिइन् । सो दिन डान बल्ल तल्ल स्वदेश फिर्ताबाट बचे । तर यस घटनाबारे डान र उसको विद्यालयबाट फरक फरक खालको कुरा आएका छन् । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा परीक्षा नजिकिदैं गर्दा आफू प्रति उदार रहन डानले विद्यालयसँग आग्रह गरेका थिए ।
आफूले मिहेनत गरेर पढ्ने अनि परीक्षामा उत्तिर्ण हुन्छु भन्दै विद्यालयमा बस्न आग्रह गरेको भएपनि विद्यालयले आफ्नो अनुरोध नसुनेको उनको भनाइ छ । तर डान भियतनाम फर्केर जान चाहेको विद्यालयको जिकीर छ ।
विद्यालयबाट निकाल्ने आदेश फिर्ता लिन डानले भनेका थिए । विद्यालयले मानेन् । अन्ततः उनीसँग कुनै विकल्प रहेन अनि सन् २०२० को जनवरीमा डान भियतनाम फर्किए । जापानमा आफ्ना समर्थकहरु मार्फत डानले विद्यालयलाई टयूशन शुल्कको केही हिस्सा फिर्ता गर्न भनेका थिए । यस विषयमा विद्यालयसँग वार्ता पनि चलिरहेको छ ।
यस विषयमा माइनिची शिम्बुनले सेप्टेम्बरमा जिज्ञाशा राख्दा यो विद्यालयको मामिला भएको र निजी जनकारी हो भन्दै विद्यालयका प्रतिनिधिले केही पनि बताएनन् । जापानमा पढ्न आउनु अघि विद्यार्थीहरुको जापानी भाषा प्रविणता कम्तिमा पनि एनफाइभ स्तरको हुनु पर्छ ।
डानको भाषा क्षमता निकै कमजोर रहेको र विद्यालयको नियमका आधारमा निकालिएको विद्यालयको कानून प्रतिनिधिको भनाई छ । डानलाई निकालेर विद्यालयले कुनै गैरकानूनी काम नगरेको र विद्यार्थी अनि उसको अभिभावकको स्वीकृति समेत लिएको उनी बताउँछन् ।
विद्यार्थीको रुपमा सम्मान गरेको महसुस आफूले नगरेको भियतनाम फर्किनु अघि डानले गुनासो गरेका थिए । जापानबारे आफ्नो मनमा राम्रो छाप भएपनि सबै मानिसहरु राम्रो नभएको उनले बताएका थिए ।
खराब रेकर्ड भएका वा हराइरहेका विद्यार्थी धेरै हुने विद्यालयहरुले विद्यार्थीका लागि आवासीय हैसियतमा आवेदन दिँदा अध्यागमनले खासै समर्थन गदैनन् । अनि यस्ता विद्यालयले भर्ती गर्न पाउने विद्यार्थीको संख्यामा पनि कटौती गरिन्छ ।
जापानमा डानको जस्तै समस्या भोग्ने विदेशी विद्यार्थीहरु कयौं छन् । टयूशन शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीको ग्र्याजुएशन प्रमाणपत्रमा रोक लगाएर शुल्क माग्ने अनि पासपोर्ट लिइदिने घटनाहरु पनि पाइएका छन् ।